Sida Loo Daadi Ka Raadi Raadinta My iPhone - DHAMMAAN Hababka Suurtagal Ah | Wararka IPhone
Ignacio Sala | | macruufka, Casharrada iyo buugaagta
Luminta iPhone-keena waa waxa ugu xun ee maanta nagu dhici kara, adeegsadayaal badan, xitaa in ka badan boorsada, maaddaama aysan ahayn oo keliya arrin qiimo dhaqaale leh, laakiin sannadihii la soo dhaafay waxay noqotay qalab ay ku jiraan macluumaad badan oo ku saabsan na, iyada oo loo marayo codsiyada kala duwan in noo oggolow inaan si gaar ah u maamulno xogta xisaabaadkayaga bangiga, kaararka amaahda, furaha sirta ah, dukumiintiyada aqoonsiga ...
Markii IPhone-ku uu bilaabay inuu noqdo aalad la xiriirta xaalada dadka lahaa, xatooyada qalabkan ayaa ahmiyada koowaad siisay saaxiibada dadka kale, isagoo ahaa aaladii ugu badneyd ee laga xado Mareykanka. Si looga hortago tuugada inay ka ganacsadaan aaladaha la xado si ay dib ugu iibiyaan, Apple wuxuu soo jiiday muuqaalka Find My iPhone oo kor u qaadaya shaashadiisa, waana muuqaal noo ogolaanaya inaan ka fogaanno jooji iPhone-keena si markaa dib loogu isticmaali karo illaa aan haysanno lambarka sirta ah ee koontada uu ku xiran yahay.
Iyada oo loo marayo Raadinta iPhone-kayga, waxaan ku ogaan karnaa wakhti kasta, taas oo ah meesha uu ku yaal qalabkeenna, oo ay kujirto markii ugu dambeysay ee aad khadka internetka gasho, hawl ku habboon markaynu luminno ama aynu halmaamayno meel uun oo baytarigiisii ​​ka dhammaaday
Laakiin marka lagu daro, waxaan sidoo kale u diri karnaa cod aaladda, oo ah hawl ku habboon marka aan ku weyno guriga, ama inta u dhexeysa barkimooyinka fadhiga, kamaradda ama qol kasta laakiin ma qaban karno. Laakiin shaqada ugu muhiimsan ee shaqadani na siiso waa suurtagalnimada in laga xirto qalabka si fog si aan cidina u heli karin marinkeenna xitaa haddii aad ogtahay lambarka furaha ee loogu talagalay.
Ikhtiyaarka xannibaadda fog waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan farriin ku tusno terminal-ka markii aan xannibnay sidaa darteed haddii ay dhacdo luminta dhabta ah ee boosteejada, samatar wanaagsan oo helay waad nala soo xiriiri kartaa si aad noogu soo celiso.
1 Maxay fikrad fiican u ahayn in la joojiyo Raadi My iPhone
2 Maxaan u joojinayaa?
3 Sida loo joojiyo Raadi My iPhone ka iPhone
4 Jooji raadinta iPhone-kayga haddii uusan daarin
5 Jooji Raadi My iPhone ka Windows ama Mac
6 Jooji raadinta iPhone-kayga si aan u dayactiro
7 Jooji raadinta iPhone-kayga bilaa lambarka sirta ah
8 Jooji Raadi My iPhone ka iCloud
Maxay fikrad fiican u ahayn in la joojiyo Raadi My iPhone
Deactivating the Find my iPhone function laguma talinayo, marka laga reebo kiis gaar ah oo aan ku iibin doonno qalabka, waxaan ku arki doonnaa qaybta soo socota. Shaqadani waxay noo oggolaaneysaa wakhti kasta inaan xakameyno aaladdayada, xakameynteena waan xannibi karnaa gebi ahaanba, ku soo bandhig farriinta shaashadda lambarka taleefankaaga si aad noogu soo celiso, tirtirto dhammaan waxyaabaha ku jira ka sokow helitaankiisa, oo ay ku jiraan meeshii ugu dambaysay ka hor intaan laga tegin iyada oo aan lahayn khadka internetka.
Maxaan u joojinayaa?
Sababta kaliya ee loo joojiyay baaritaanka raadinta iphone-kayga waa kali iyo si gaar ah marka aan dib u soo ceshano aaladda markii aan sii wadayno iibinta, si aysan mar dambe ula xiriirin aqoonsigeena Apple. Xaaladahaas, waxay noqon doontaa qalabka laftiisa ama codsi iTunes ah Waxay na weydiin doontaa inaanu fureyno haddii aan dooneyno inaan ka soo ceshanno meeshii ugu horreysay.
Sida loo joojiyo Raadi My iPhone ka iPhone
Habka ugu dhaqsaha badan ee loo joojiyo Raadi My iPhone had iyo jeer waa iyada oo loo marayo qalabka, ha noqoto iPhone, iPad, ama iPod taabasho. Si tan loo sameeyo, waxaan aadeynaa menu-ka Settings, guji isticmaaleyaasheena ka dibna riix iCloud. Shaashadda xigta ayaa soo bandhigi doonta dhammaan adeegyada iCloud ee aan ku hawlgalnay qalabkeenna. Waa inaan tagnaa Raadi iPhone-kayga iyo u wareeji badhanka bidix si aad u hawlgeliso.
Waqtigaas iPhone, iPad ama iPod taabashada ayaa na weydiin doona, haa ama haa, lambarka sirta ah ee koontadayada iCloud, la'aanteedna waligeen ma awoodi doonno inaanu joojino adeegga goobta iCloud, markaa waa inaad haysataa ereyga sirta ah.
Jooji raadinta iPhone-kayga haddii uusan daarin
Haddii iPhone-geena uu gebi ahaanba joojiyay shaqadiisa oo aysan jirin waddo loo maro, ka hor inta aan loo qaadin adeegga farsamada, waa inaan barkinta ka helno ikhtiyaarka Raadinta iPhone-kayga. Si aad u awoodo inaad sameyso, Waa inaan ka soo galnaa websaydhka icloud.com.
Mar alla markii aan galnay xogta Aqoonsigeenna Apple, dhagsii ikhtiyaarka Raadinta, oo ka xulo qalabka aan dooneyno in aan ku shaqeyno Raadinta iPhone-kayga. Marka xigta waxaan aadi doonnaa qeybta midig ee kore ee shaashadda, halkaas oo magaceena lagu muujiyay, guji hoos-hoos-guji oo guji Settings iCloud.
Guji qalabka aan dooneyno inaan ka joojino raadinta shaqadeyda raadinta iPhone dhagsii x lagu muujiyey dhankeeda midig. Websaydhku ma codsan doono xaqiijin iyo inaan mar labaad galno lambarka sirta ah ee aaladdayada. Marka hawshu dhammaato, muuqaalka Raadi My iPhone horeyba wuu u naafoobi doonaa.
Jooji Raadi My iPhone ka Windows ama Mac
Apple nama siiso wax codsi ah oo aan ku joojineyno raadinta raadinta iPhone-kayga, iPad-ka ama iPod taabashada tooska desktop-ka ama laptop-ka, markaa waa inaan ku sameynaa iCloud.com fulinta isla talaabooyinka in aan ku tusay qaybtii hore.
Jooji raadinta iPhone-kayga si aan u dayactiro
Haddii qalabkeenu dhibaato leeyahay, dibedda iyo gudaha labadaba, ha ahaato shaashaddeeda ama qayb ka mid ah gudaha, tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan marwalba qabanno waa inaan joojino Raadinta iPhone-kayga. Nidaamkani waa lagama maarmaan waana qasab Apple wuu beddeli karaa qayb kasta oo ka mid ah badeecada oo dib u hubso inay shaqayso mar haddii dhibaatada la xalliyo. Haddii aan heli karno qalabka, waxaan u soconaa sidii qaybta Ka jooji iPhone-kayga iPhone-ka. Laakiin haddii aynaan daarin karin, waxaan ku samayn karnaa iyada oo loo marayo iCloud.com ta iyo sida aan ugu sharraxay qaybta Jooji raadinta iPhone-kayga haddii uusan daarin.
Jooji raadinta iPhone-kayga bilaa lambarka sirta ah
Dariiqa kaliya ee lagu furi karo Raadinta shaqadayda iPhone waa lambarka sirta ah ee koontadeena iCloud, la'aanteedna suurtagal maaha in la sameeyo, maadaama ay tahay geedi socod lama huraan ah in la dhameystiro howsha. Haddii la furi karo iyada oo aan lahayn lambarka sirta ah ee koontadayada iCloud, amniga ay bixiso shaqadan wax macno ah ma samaynayso.
Jooji Raadi My iPhone ka iCloud
Haddii aynaan haysan qalabkeenna jir ahaan gacanta si aan u awoodno inaan joojino Raadinta iPhone-kayga, sida kaliya ee lagu sameyn karaa waa iyada oo loo marayo shabakada icloud.com, oo fulinaya isla hawshii aan kor kaga faalooday qaybta Demi taleefankayga iPhone-ka haddii uusan shidan doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo damiyo Raadi My iPhone
Wanaagsan waxaan iibsaday gacan labaad iPhone 6 kaas oo aan isticmaali jiray dhowr maalmood sababtoo ah waxaan ku isticmaalayay idullaahda milkiilaha hore sifiicanna waan usoo celiyay taleefankii wershadda hadana waxay i weydiineysaa idhka tufaaxa oo markuu qofku iibsado telefoonka Isaga kaliya ayuu i siiyay laakiin isagu ima uusan siinin erayga sirta ah. Yuu i caawiyaa, ma doonayo in lacagteyda lumiyo, qofkii iga iibiyey ayaa dalka ka dhoofay wax xiriir ahna lama lihi.
Iima siineyso ikhtiyaarka aan ku joojiyo shaqada FIND MY IPHONE ee ku taal iCloud.com, sida halkan lagu muujiyey.
isla waxbaa igu dhaca 🙁
Dhibaato ayaan qabaa, iphone-kayga ma shaqeynayo markii aan codkeyga ku soo galayna bogga ayaa i weydiinaya macluumaadkeyga ka dibna lambar xaqiijin ah, sidee baan u arkaa haddii aanan isticmaali karin?